भनिन्छ भगवानले पनि छुट्याउन सक्दैनन यि दुई राशि बिचको प्रेम - IAUA
ramkrishna April 18, 2021	भनिन्छ भगवानले पनि छुट्याउन सक्दैनन यि दुई राशि बिचको प्रेम
आफ्नो राशिबाट तपाईंले आफ्नो पार्टनरले सधैं प्रेम गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी दुइ राशिबिचको प्रेमलाई भगवानले पनि छुट्याउन सक्दैनन । सिंह राशि भएका मानिस अभिमानी र कहिल्यै हार नमान्ने खालका हुन्छन् भने तुला राशि भएका पार्टनरसँग उनीहरू आफूलाई अलग महसूस गर्छन् ।
त्यस्तै कन्या राशिका मानिसहरु पनि आफ्नो पार्टनरबाट दुईगुणा बढी अपेक्षा राख्छन् भने कुम्भ राशि भएका मानिसले रहस्यलाई सम्हालि राख्नमा विश्वास गर्छन् । यसको बाबजुद पनि उनीहरू परफेक्ट पार्टनर मानिन्छन् । फरक स्वभाव भएपनि उनीहरूको प्रेम निकै मजबुत हुन्छ ।
Previous Previous post: सपनामा रोएको देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा बच्चा देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्